Rooblow ciidanku wuu ku milan yahay Siyaasadda | KEYDMEDIA ENGLISH
Biixi, wuxuu gobolka Hiiraan dhawaan geeyay lacag uu ka qaaday Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, si meesha looga saaro General Xuud, oo Kooxdu u aragtay inuu khatar ku yahay amniga xubno Fahad Yaasiin ugu horreeyo oo kuraas ka raasan doona Baldweyne.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka ee 3 - 9 Janaayo 2022 ka socday Muqdisho, oo ujeedadiisu aheyd, in lagu dhammeystiro qodobadii iyo habraacyadii lagu gaarey shirkii 24 Ogost 2021, ayaa lagu go’aamiyay in Ciidanka ka fogaadan ku milanka Siyaasadda, hayeeshee, qodobkaas ayaan dhaqan gallin.
Sida ku cad, qodobka 16-aad ee War-murtiyeedkii soo baxay 9 Janaayo 2022, Ciidamada ayaa lagu amaray in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha Siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta Amniga Dalka iyo Dadka una hoggaansamaan dhammaan Shuruucda iyo xeerarka Dalka.
Ka hor inta uusan Golaha Wadatashiga Qaranka, go’aankaas ka soo saarin arrinka ciidanka, dhamaan taliyayaasha hoggaamiyaha qeybaha kala duwan ee Ciidanka Qalabka Sida, ayaa askarta ku amaray in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda.
Hayeeshee, isla-saraakisha ayaa ku milan siyaasadda, oo Taliyaha Ciidanka Lugta, Generaal Biixi, Taliyaha KMG ah ee NISA, Yaasiin Farey iyo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Farxan Qaroole, ayaa qeyb ka ah shaqsiyaadka u ololeynaya MW hore Farmaajo.
Biixi oo ka mid ah saraakiisha farqaha dhiigga ku leh, ee dhamaadkii Kacaankii Ina Siyaad Barre dadka ku laaysay Shabeellaha Dhexe, ayuu Farmaajo u adeegsaday soo xero galinta Xuud, oo ah hoggaamiyaha Jabjad aas-aasantay kadib boobkii xilka ugu sarreeya Hirshabeelle.
U jeeddada Biixi, waa inuu furo saaxadda amni ee Hiiraan, si Kooxda Fahad hoggaaminayo kuraas baarlamaan uga doontaan Baladweyne, wuxaa qorshahaas, garab ku siiyay MW ku xigeynka Maamulkaas, Yuusuf Dabageed, iyo iyo Guddoomiyaha Gobolka, Cali Jeyte.
Taliyaha KMG ah ee NISA, Yaasiin Farey, oo ka mid ah shaqsiyaadka ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil Faarax, ayaa isna ku sugan Dhuusamareeb, waxaana halkaas loo geeyay inuu fududeeyo doorashada saraakiil NISA ka socda oo Qoorqoor ay kooxdu kala heshiisay inuu kuraas soo siiyo.
Yaasiin Farey, wuxuu 25 November 2021, Dhuusamareeb, ku soo boobay Kursiga hope67, kaas oo hadda Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Rooble, looga fadhiyo inuu ku daro kuraasta doorashadooda dib loogu laaban doono.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Farxan Qaroole, wuxuu dhawaan amar ku bixiyay in la hor istaago, bannan-bax nabadeed oo bulshada degmada Hodan ku taageereysay Ra’iisul Wasaaraha, isla-markaana looga soo horjeeday af-ganbigii 27-kii December.
Sidoo kale, wuxuu qeyb ka ahaa, amar ka soo baxay Gobolka Banaadir, kaas oo 11 January 2022, lagu sheegay in Muqdisho aan lagu qaban karin bannaan-bax looga soo hor jeedo Farjaamo, xiili maalin ka hor amarkaas, uu caasimada ka dhacay mudahaaad taageero loogu muujiyay Farmaajo.